ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၅၀၀ နာရီတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ သွားရောက်၍ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Samdech SAY Chhum နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော်များအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ဆွေနွေးခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရင့်နန်းတော်နှင့် ဘုရင့်မယ်တော်စံအိမ်များသို့ သွားရောက်၍ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘုရင် His Majesty Norodom Sihamoni နှင့် ဘုရင့်၏ မယ်တော် Her Majesty Norodom Monineath Sihanouk တို့အား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘုရင် His Majesty Norodom Sihamoni နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပြည်သူအချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့်ရေးတို့အတွက် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘုရင်အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Samdech HUN SEN တည်ခင်းဧည့်ခံသော ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားများသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်စိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။